China GT andian-tsarimihetsika tabilao andian-tsarimihetsika China Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Efijery amponga GT series
GT - andiana amponga drum dia fitaovana fitiliana manokana novolavolain'ny orinasanay ho an'ny metallurgy, indostrian'ny simika, akora fananganana, fitrandrahana ary indostria hafa. Mandresy ny olan'ny fanakanana ny efijery io rehefa manara-maso ireo fitaovana mando amin'ny alàlan'ny efijery mihetsiketsika boribory sy ny efijery mivantana, manatsara ny fivoahana sy ny fahatokisana ny rafitra fitiliana, ary derain'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
GT - andiana amponga drum dia fitaovana fitiliana manokana novolavolain'ny orinasanay ho an'ny metallurgy, indostrian'ny simika, akora fananganana, fitrandrahana ary indostria hafa. Mandresy ny olan'ny fanakanana ny écran rehefa manara-maso ireo fitaovana mando amin'ny alàlan'ny efijery mihetsiketsika boribory sy ny efijery mivantana, manatsara ny fivoarana sy ny fahatokisana ny rafitra fitiliana, ary derain'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ny motera dia mifandray amin'ny fitaovana amponga amin'ny alàlan'ny reducer amin'ny alàlan'ny fifangaroana, ary ny amponga mitondra fiara dia mihodina manodidina ny axis. Rehefa miditra ao amin'ny fitaovana amponga ny fitaovana, noho ny fihodinan'ny amponga (azo ahodina), dia ahodina sy mihodina ireo fitaovana eo amin'ny efijery, ka ireo fitaovana mahay dia avoaka amin'ny alàlan'ny fivoahana eo ambanin'ny farany aoriana ny amponga, ary ireo fitaovana tsy voamarina dia avoaka amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo amin'ny rambon'ny amponga. Noho ny fivadibadihana sy ny fihodinan'ny fitaovana ao anaty amponga, dia azo esorina ireo fitaovana tafapetraka ao anaty lavaka lamba mba tsy hisakanana ny lavaka lamba.
Raha ny fijerin'ny finday azy dia mora tohina sy mora kokoa noho ny mihetsika lehibe. Vita ny fitaovana anatiny, ny tabilao amponga dia môtô, reducer, fametrahana drum, fampiasa, rakotra tombo-kase, fanafarana ary fanondranana. Ny maodelim-panafody dia nalamina teo amin'ny rindrina miaraka amin'ny fitaovana mihodina amponga, izay nalahatra teo amin'ny vatan-tsolika ary nifandray tamin'ny lavaka famolavolana.
Fampandehanana famafazana fantsom-panafody feno fantsom-pandehanana rehefa ny fitaovana ao anaty fametrahana drum, noho ny fitongilanana sy ny fihodinan'ny fametrahana ny amponga, ny fitaovana eo amin'ny sehatry ny efijery dia avadika sy ahodina, ka ireo fitaovana mifanaraka amin'ny fepetra arahana dia avoaka amin'ny alàlan'ny outlet. eo amin'ny farany ambanin'ny tendrony aoriana amin'ny amponga, ary ny fitaovana tsy mitombina dia avoaka amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo any amin'ny faran'ny rambon'ny amponga. Noho ny fivadibadihana sy ny fihodinan'ny fitaovana ao anaty amponga, dia azo esorina ireo fitaovana miraikitra amin'ny lavaka lamba.
Model Fahaizan'ny fitsaboana m³/ h Herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
GT1030 10-60 4
GT1040 11-80 4
GT1230 12-100 5.5
GT1250 15-140 5.5
GT1530 16-150 5.5
GT1540 18-160 7.5
GT1550 20-180 11
GT1560 20-200 11
Previous: Sarimihetsika fanodinam-peo mihetsiketsika matetika an'ny GPS
Manaraka: Efijery roller GZS
Sarimihetsika fanaovana grady amponga
Masinina fasika amin'ny tabilao amponga
Sarimihetsika mihetsiketsika momba ny amponga
Masinina fitiliana amponga
Sarimihetsika fitetezana milina fitiliana amponga
Efijery amponga Gts
Pikantsary amponga mihodina
Pikantsary amponga mangovitra
Skrin-tsoratry ny tabilao mihombo
Efijery zezika andiany HFS
CZS andian-tsarimihetsika mihetsiketsika
Efijery roller GZS